बागलुङ निसीका एक युवक २० दिन देखि बेपत्ता ! – ebaglung.com
२०७५ आश्विन ६, शनिबार १६:०४	Top News, अन्य समाचार
कुमबिर बिश्वकर्मा, बुर्तिवाङ २०७५ असोज ६ । बागलुङ जिल्ला निसीखोला गाउँपालिका वडा न -५,कामदेराका बुवा जित बहादुर बिश्वकर्मा र आमा पबित्रा बिश्वकर्माको छोरा बर्ष ३० अन्दाजी -५ फुट पातलो राजकुमार बिश्वकर्मा गत भदाै १७ गते साझ ५ बजे देखि बेपत्ता भएको उनको श्रीमती मङ्गा बिश्वकर्माले बताइन ।
घर देखि बिदेश जाने भनी राहदानी (पासपोर्ट )बनाउन काठमाडौ भदाै १५ गते शुक्रबार हिडेको र काठमाडौ गए पछि नयाँ बस पार्क, मित्रनगर स्थित हरिबम नब दुर्गा गेस्ट हाउसमा बसेको बताइएको छ । होटेलमा बस्ने क्रममा पासपोर्ट बनाउनको लागि आफ्नो नागरिकता र सम्पूर्ण कागजातहरु काठमाडौ बस्दै आएको स्थायी ठेगाना ढोरपाटन नगरपालिकाका कोक बहादुर बिश्वकर्मालाइ बुझाएको उनको परिवारले बताएका छन ।
उनको सम्पुर्ण कागजातहरु कोक बहादुर बिश्वकर्मालाइ बुझाए पछि उनी भदौ १७ गते बागलुङ घर जाने भनेर बुर्तिबाङ सम्म बस न.८०२ नम्बरको गाडीमा टिकट लिइ स्वयम्भू सम्म गाडी चढेर स्वयम्भूमा गाडीबाट ओर्लिएको गाडी चालकले बताएका छन ।
निज राजकुमार बि.क.ले १७ गते दिउँसो ४ बजे ९८०६१६८४२० को नम्बर बाट घर फोन गरेको बताएइको छ फोन गरेर कहाँ हो भनी सोधपुछ गर्दा थाहा छैन भनेको उनकी श्रीमतीले बताइन ।
राजकुमार बिश्वकर्मा चार बर्ष अगाडि साउदी गएर आएका थिए ४ बर्ष सम्म उनी गाउमै कृषि गर्दै आएको र उनि मुस्ताङ पनि काम गर्न गएको, मुस्ताङबाट आए पछि मानसिक असन्तुलनमा परे झै गर्ने बताइएको छ । उनी “कहिले हराए भन्ने,कहिले मलाइ कसैले कात्न आयो, मलाइ कसैले लखेटेर मार्यो” भन्ने शब्द निकाल्ने गरेको उनकै श्रीमतिले बताइएकी छिन ।
उनको तीन भाइ छोरा समेत रहेका छन । जेठा छोरा बर्ष १२ को रेकेश बि.क.माहिला छोरा बर्ष ७ को अबिशेक बि.क. कान्छा छोरा बर्ष ३ को सन्देश बि.क.समेत रहेको छन । उनी कक्षा १० सम्म अध्ययन समेत गरेका थिए ।
उनी हराएको भनी प्रहरी चौकी बागलु निसीमा उजुरी दिइएको छ । चौकीमा उजुरी दिए पनि कुनै खोज तलास नगरेको उनको परिवारले बताएका छन ।
लौरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या गर्ने श्रीमान प्रहरी नियन्त्रणमा !